"Army" iqembu - ukukhipha yangempela ngokuqondene nalo mthetho. Against isizinda iningi ekhona amaqembu abesifazane (kokubili Ukraine kanye angaphandle) soloist hhayi kuphela ukucula kahle kodwa futhi ukudansa. Ngakho-ke sokujabulisa izethameli kanye nezinye abaculi ekulingiseni aqondakala kalula.
Biography "Army" iqala nge 2007. Iqembu kwahlelwa Kiev. Uma ukholwa ukuthi ulwazi posted on the website esemthethweni, umsunguli wayo waba umkhiqizi Nikitin Yuriy. Girls ethimbeni wacosha a eside futhi ngokucophelela. Yilelo nalelo lungu we "Army" - akamusha ibonise ibhizinisi, abanye isikhathi eside wasebenza okungcono ballet izinkampani, ngemuva nezinye - izigaba ezemidlalo, futhi ezinye ziye ngisho yaklonyeliswa isihloko master kwezemidlalo.
"Army" iqembu lakhula ngokushesha. Ithimba ngisho sabizwa ngokuthi izikhali zembubhiso. Bright zomculo impahla kanye umdanso imibukiso, okuyinto ayehambisana nke iculo band, amantombazane baletha udumo.
Ngemva enchanting ukusebenza kusukela soloists eChile "Army", uquqaba lwezingelosi abalandeli ngamazwe. America angathanda ukugqoka amantombazane ngezingalo zakhe, ehhotela wasala isikhala khulula, njengoba waphoqwa izimbali iletha. "Yini kangaka kwenzekani lapho?" - unesithakazelo singers Ukrainian amaqembu ezinkampani nasemishadweni. Girls ngokujabula ukwabelana emibonweni yabo mayelana iqhaza umkhosi siyaziqhenya ukusho ukuthi bambonile Latin inkanyezi American DJ Mendez.
"Army" isakhiwo Group
Kusukela iqembu lokuqala awuhambanga "umlilo" umculi Anastasia Snadnaya futhi blonde Irina Stepanova. Esikhathini esithile kule "Army" babe Oksana Zadorozhna, umdansi odumile Julia Kavtaradze nesi-Ukraine umculi Anastasia Kumeyko (namuhla kungcono eyaziwa njengendlela soloist Nikita iqembu). Ngo-2009, iqembu has a ilungu elisha - DJ Matilda, selibe yaduma ngenxa show yayo kongqingili. Yiba Neqhaza ithimba ukuthuthukiswa lenzé kakade, futhi njengamanje imi ngedwa.
Ngemva ukubukeka amantombazane Ukraine show ibhizinisi laqala hype xaxa. Phela, ngesikhathi lapho abanye abaculi esimweni ukushiya esigabeni, umculi "Army" wathatha ingxenye kuzo zonke show kuze Ngenyanga yesishiyagalombili sokukhulelwa, futhi wakwazi ukwenza ngokuphelele amazing ukuze stunts indoda evamile choreographed.
Lokhu furor isibe esikisela ucansi isithombe session singers band ngoba umagazini madoda Playboy. Izithombe abevelele, ngoba yilowo nalowo wesifazane onesibindi obala pose, ukuba ngenyanga 8 ekhulelwe, njengoba kwenza omunye wabahlanganyeli. Girls wawa kathathu ekhaveni ethandwa umagazini ecwebezelayo ngoba EGO amadoda.
Izinguquko zakamuva lichaza ekwakheni ezenzeka ngo-2010: ukuba "Army" wajoyina Vera Varlamova - finalist we ithalente show "Superzіrka". Nature akuniké izwi lakhe eliyingqayizivele lahlukene 4 octaves.
Ngenxa iqembu - umkhankaso womhlaba wonke ukukhangisa brand Adidas, "uzakwethu ebhange", ezemidlalo eziyinkimbinkimbi "Kievsportklub" Girls nazo karaoke club "PatіFon".
Imisebenzi esiteji ngamazwe
Iqembu zomculo "Army" ekumelele ezweni lakhe ngesikhathi muzfestivale ngamazwe eChile "Vina del Mar" - kwekulu eNingizimu Melika (esikalini ngakho uqhathaniswa "Eurovision"). Bonke ababambiqhaza kumele ukucula bukhoma, ukusetshenziswa phonograms akuvunyelwe. Iqembu ngenza isithunzi esiteji okufanayo Sting, pit bull kumphathi-dolobha Award Izethameli, futhi yaqanjwa ithimba Ukrainian izintatheli isasasa. zokubhukuda ewubuciko, izingxoxo babeqotho futhi Antics inkanuko amantombazane ngoba omunye amasonto amabili echazwe kuziteshi Latin American nasesikhathini tabloids. Omunye vocalists wabalwela umqhele Queen kazwelonke ubuhle umncintiswano, futhi kuyafaneleka kunalokho yimpumelelo: ke kudlule ubuhle bendawo, futhi onobuhle ngisho owaziwa.
Njengoba kushiwo ngaphambili, iqembu bahlanganyela umkhosi yaphela nge omjwayele nokuthi ngokubambisana neNhlangano rapper ethandwa DJ Mendez. Ngemva komhlangano namantombazane wanikezela leli qembu sikhunjulwe ithrekhi entsha Ngiyeke, lapho ngokuhlanganyela wenza isiqophi ku Ukraine.
Ama-aAlbhamu ka "Army"
Ngenxa ithimba olulodwa "Sakwenza lokho", eyakhululwa ngo-2007, 6 omfisha, albhamu "About That" futhi eziningi hits.
I-albhamu "About That" waphuma ngo-2009 futhi ngokushesha ithengiswe, futhi izinto eziningi kakhulu. ukukhululwa kwe-albhamu baba ukumangala, njengoba abanye abantu babhekwe njengabezinye ukubukeka uqobo "Army." Inkinga eyinhloko show ibhizinisi lesimanje ubhekwa ukufana kwamazwi abaculi kanye repertoires yabo. "Army" qembu kungekho okuhlukile ngokuqondene nalo mthetho, futhi lokhu kwabenza ukutuswa izethameli.
Umculo band kwenza izinsuku licace futhi baphokophelele ukuba anqobe eziphakeme wake entsha. Iqembu "Army" lihlabelela ngalokho Kuyathakazelisa intsha yanamuhla. izingoma zazo bafundiswa amantombazane kanjani ukulwa emuva Maniac, kanti guys ukwenza ukubukeka kuyindida kabanzi ku ngokwabo. Umculo "Army" ugcwele amandla futhi unethemba.
Kuyini suite Symphonic? "Scheherazade" futhi indaba yayo imisebenzi Rimsky-Korsakov
Ngubani ilungu bhá we "Factory zezinkanyezi-4"?
Rappers American: Dr. DRE, u-Eminem, 2Pac
I "Aria": discography, izithombe, ama-albhamu
Massage bokubuyisana ngemva kokushaywa unhlangothi
13 izimpawu ukuthi ozakwabo bacabanga ukuthi uyisimungulu
Youth Theatre, Vladivostok: Uhlolojikelele, incazelo, umlando, poster kanye nokubuyekeza
Kukuphi rekhoda iPhone izwi? Ukufunda ukuthatha amanothi ku-iPhone yakho
Kungani i intshe ukufihla ikhanda layo esihlabathini? Ingabe kunjalo ngempela?
Amniocentesis - kuyini? Izinkomba, izingozi futhi ukufeza ucwaningo